Isu lezinkampani zokuhweba zonyaka
Isu lezinkampani zokuhweba zonyaka - Zokuhweba zonyaka
Izinyanga zonyaka ngezansi zibhalwe ngendlela esijwayele ukuzibiza ngayo ngolimi lwesiZulu nangesiZulu soqobo. Isu lezinkampani zokuhweba zonyaka.
SELUKHISHIWE uhlu lwezimoto okuzokhethwa kuzo iWesBank/ SAGMJ Car of the Year. UBaba usixoxela ngomehluko phakathi komungcwi owenziwa ngabantu noma abathakathi kanye nesidalwa esimbi.
Ngenxa yokuthi leli. Izinkunzi zezimoto ezihlabahlosile zonyaka Izindaba / 13 December, 12: 51pm / FANELESIBONGE BENGU Extended Public Works Programme( EPWP) workers gathered at the Mayibuye Centre in Galeshewe to watch the Memorial service of former president Nelson Mandela.
Ngiyabona kungena abakwaCele kanti abakwaSokhulu abahlangani ndawo ngobuhlobo nabakwaCele. Created Date: 5/ 19/ 10: 18: 45 AM
UBaba Nyambose ohlala endaweni yaseNanda, owazalelwa endaweni yaseMkhomazi wafika eThekwini ngokusebenza. Kunjengo september kuthiwa uMandulo ngoba kuqala kwakuqalwa ukutshala ngaye kodwa manje izikhathi sezashintsha sekutshalwa ngesonto lesibili lika November.
Ngizama ukulandela uMlando wakwamMthiyane base RichardsBay nabakwaSokhulu ubuhlobo. Ngo- Okthoba 23 eNanda Polo Club, eGoli kuzomenyezelwa ezizoba kowamanqamu okuzokhethwa kuzo.
Feb 19, · Thokozani, Kuyiqiniso ukuthi manje izintuli ziba ngo August, lokho kwenziwa ukushintsha kwesimo sezulu kodwa phambilini zaziba ngaye uJuly. Isu LikaZwelonke Lokusetshenziswa Kwemithombo Yamanzi lichaza izindlela imithombo yamanzi yaseNingizimu Afrika eyovikelwa, isetshenziswe, ithuthukiswe, ilondolozwe, iqondiswe futhi ilawulwe ngayo.
Ngingathokoza uma singacaciselwa, Muhle umsebenzi we The Ulwazi Programme.
Izincwadi mayelana nokukhetha kokuhweba
Isofthiwe kanambambili yokuhlaziya inketho